I-LandViewer - Ukuthola ukushintsha manje kusebenza kusiphequluli - iGeofumadas
I-LandViewer - Ukuthola ukushintsha manje kusebenza kusiphequluli
Ukusetshenziswa okubaluleke kakhulu kwedatha yokubona okude kuyisiqhathaniso sezithombe ezivela endaweni ethile, ezithathwe ngezikhathi ezehlukene ukukhomba izinguquko ezenzeka lapha. Njengoba inqwaba yezithombe ze-satellites njengamanje zivulekile, isikhathi esingaphezu kwesikhathi eside, ukutholakala kwezinguquko kwezinguquko kungathatha isikhathi eside futhi cishe kungabonakali. I-EOS Data Analytics idale ithuluzi elizenzakalelayo ukutholwa kwezinguquko kwimikhiqizo yayo ye-flag, i-LandViewer, ephakathi kwamathuluzi amafu afanele kakhulu wokusesha nokuhlaziywa kwezithombe ze-satellite emakethe yamanje.
Ngokungafani nezindlela ezibandakanya amanethiwekhi we-neural ukuthi thola izinguquko kuzici ezikhishwe ngaphambilini, ukuguqulwa kokuguquguquka kwe-algorithm okusetshenziswe ngu EOS usa isu elisekelwa ngamaphikseli, okusho ukuthi izinguquko phakathi kwezithombe ezimbili ze-multiband raster zibalwa ngezibalo ngokususa amanani we-pixel ngosuku olulodwa ngamanani we-pixel wezixhumanisi ezifanayo zenye idethi. Lesi sici esisha sesiginesha senzelwe ukuzenzekela umsebenzi wokuthola izinguquko nokuletha imiphumela enembile ngezinyathelo ezimbalwa nangengxenyana yesikhathi esidingekayo kuqhathaniswa ne-ArcGIS, QGIS noma enye isofthiwe yokucubungula isithombe se-GIS.
I-interface yokuthola ukushintsha. Izithombe zogwini lomuzi waseBeirut zikhethiwe ukukhomba ukuthuthukiswa kweminyaka yamuva.
Ukuthola izinguquko edolobheni laseBeirut
Ububanzi obungenakubalwa kwezicelo: kusuka kwezolimo kuya ekuqaphelweni kwemvelo.
Enye yezinjongo eziyinhloko ezibekwe yithimba le-EOS kwakungukwenza inqubo yokuthola ushintsho eyinkimbinkimbi yedatha yokuzwa okukude ifinyeleleke futhi ibe lula kubasebenzisi abangenalwazi abavela ezimbonini ezingezona ze-GIS. Ngethuluzi lokuthola ushintsho lweLandViewer, abalimi bangazikhomba ngokushesha izindawo ezilimale emasimini abo kusukela esichothweni, isiphepho noma izikhukhula. Ekuphathweni kwamahlathi, ukutholwa kwezinguquko Emfanekisweni wesathelayithi, kuzoba wusizo ekulinganiseni izindawo ezishile ngemuva kokusha kwehlathi nokuthola ukugawulwa kwemithi ngokungemthetho noma ukuhlaselwa komhlaba wamahlathi. Ukubheka izinga kanye nezinga lokushintshwa kwesimo sezulu (njengokuncibilika kweqhwa lasepoland, ukungcoliswa komoya namanzi, ukulahleka kwendawo yokuhlala yemvelo ngenxa yokwanda kwamadolobha) ngumsebenzi oqhubekayo ososayensi bezemvelo, futhi manje bayakwazi. ngemizuzu embalwa. Ngokufunda umehluko phakathi kwesikhathi esedlule nesamanje usebenzisa imininingwane yedatha yesathelayithi ngethuluzi lokuthola ushintsho lweLandViewer, zonke lezi zimboni zingabikezela nezinguquko ezizayo.
Amacala amakhulu okusetshenziswa okutholakala kwezinguquko: ukulimala kwezikhukhula kanye nokuhlwanyelwa kwamahlathi
Isithombe sidinga amazwi ayizinkulungwane, futhi amandla okuthola ukuguqulwa ngezithombe ze-satellite ku I-LandViewer Zingahle ziboniswe kangcono ngezibonelo zangempela zokuphila.
Amahlathi asesigcwele ingxenye yesithathu yomhlaba ayanyamalala ngesilinganiso esesabekayo, ikakhulukazi ngenxa yemisebenzi yabantu njengezolimo, izimayini, izinkomo zezilwane, ukugawula kanye nezici zemvelo ezifana nomlilo wehlathi. Esikhundleni sokuqhuba ucwaningo olunzulu, ezindaweni ezinamahektare ehlathi, uchwepheshe wehlathi angaqapha njalo ukuphepha kwamahlathi anezimboni ze-satellite kanye nokuthola ngokuzenzakalelayo izinguquko ngokusekelwe ku-NDVI (I-NDVI (Normalized Difference Vegetation Index). .
Isebenza kanjani? I-NDVI iyindlela eyaziwayo yokunquma impilo yohlaza. Ngokuqhathanisa isithombe sesathelayithi sehlathi eliphelele, nesithombe esatholwa ngemuva nje kokuba izihlahla zigawuliwe, iLandViewer izobona izinguquko bese ikhiqiza isithombe sokwehluka okugqamisa amaphuzu okugawulwa kwamahlathi, abasebenzisi bangalanda imiphumela ku- .jpg, .png noma ifomethi ye-.tiff. Isembozo sehlathi esisindayo sizoba nezindinganiso ezinhle, kuyilapho izindawo ezisusiwe zizoba nezimbi futhi zizokhonjiswa ngamathoni abomvu akhombisa ukuthi abukho uhlaza obukhona.
Isithombe esivela esibonelweni seMadagascar phakathi kwe-2016 ne-2018; okwenziwe emifanekiso yesathelayithi emibili ye-Sentinel-2
Elinye icala lokusetshenziswa okubanzi lokuthola ushintsho kungaba wukuhlolwa komonakalo wezikhukhula kwezolimo, okuthakazelisa kakhulu kubalimi nasezinkampanini zemishwalense. Njalo lapho izikhukhula zithathe kanzima esivunweni sakho, umonakalo ungadwetshwa masinyane futhi ulinganiswe ngosizo lwe-NDVI-based change detection algorithms.
Imiphumela yesikhala se-Sentinel-2 siyashintsha ukutholakala: izindawo ezibomvu nezama-orange zimelela ingxenye encane yensimu; izinsimu ezungezile zihlaza, okusho ukuthi bagweme umonakalo. Umkhumbi waseCalifornia, February ka-2017.
Indlela yokwenza ukutholakala kokuguqulwa ku-LandViewer
Kunezindlela ezimbili zokuqala ithuluzi bese uqala ukuthola umehluko ezithombeni zesiphuphutheki eziningi: ngokuchofoza kwisithonjana semenyu kwesokudla "Amathuluzi Okuhlaziya" noma kuslayidi esiqhathaniswa, noma yikuphi okulula. Okwamanje, ukutholwa kokushintsha kwenziwa kuphela kwidatha ye-satellite ye-optical (passive); Ukwengezwa kwama-algorithms wedatha yokuzwa okukude okuhleliwe kuhlelwe izibuyekezo ezizayo.
Ukuze uthole imininingwane eyengeziwe, funda lo mhlahlandlela kusuka ku- shintsha ithuluzi lokuthola kusuka ku-LandViewer. NOMA qala ukuhlola amakhono akamuva I-LandViewer ngokwakho
Ukubuka Komhlaba I-Landviewer izinzwa ezikude I-Sentinel-2
Thumela Previous«Langaphambilini Inkambo yamahhala ye-AutoCAD - online
Post Next Izindaba ze-HEXAGON 2019Okulandelayo »